सिल्टलले कुन विशेषताहरू बताउँछ एक राम्रो छवि स्क्रैपर हुनुपर्छ
त्यहाँ एक हजार शब्द लायक थियो जब छवि, तर अब तस्वीरहरु लायक छन् केही सय मनपर्नेहरू, ट्वीट्स, औंलाहरू र शेयरहरू. यसभन्दा बढी, तस्वीरहरू व्यापारको समृद्धिको लागि स्क्रैप गरिएको, साझेदारी, पुनः प्रयोग गरिएको र सम्पादन गरिएको हो. मानिसहरू सामान्यतया अनुमति बिना तस्वीरहरू स्क्रैप गर्नुहोस् र विश्वभरको नेटवर्कमा विस्तार गर्न उद्देश्य राख्दछन्. तस्विर स्क्रैपिंग यी दिनमा सबैभन्दा अनावश्यक शीर्षकहरू मध्ये एक हो, तर यो उपकरणमा तपाईंको उपकरण बेल्ट अन्तर्गत तपाईले विभिन्न फाईदाहरू दिनुहुनेछ।. यो सही प्रकारको छवि स्क्रैर चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ जसले तपाईंको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछ र वेबसाइटको सम्पूर्ण प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्छ - cheap virtual server hosting. यहाँ हामीले केहि सुविधाहरू बारे छलफल गरेका थियौँ जुन एक छवि छवि स्क्रैपर हुनुपर्छ:
बिन्दु-क्लिक-क्लिक एजेंट सिर्जना:
एउटा छवि खरानीले Google र Bing छविहरू स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ।. साथै, यसले सजिलै निकासी एजेन्सीहरू सिर्जना गर्न सक्छ र तपाईंको ब्राउजिङ्ग अनुभव अद्भुत भन्दा बढी बनाउँछ. यसबाहेक, छवि स्क्रैपरले तपाइँलाई प्रोग्रामिङ वा कोडिङ कौशल गर्न आवश्यक छैन.
भिजुअल सामग्री ट्यागिंग:
तस्विर स्क्रैपरको साथ, तपाईले सटीक सामग्री निकाल्न सक्नुहुनेछ र सजिलै एक ठूलो पृष्ठमा पेजहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।. साथै, यसले डाउनस्ट्रीम प्रसोधन आवश्यकताहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ र तपाइँले मिनेटको कुरा भित्र उच्च गुणस्तर छविहरू प्राप्त गर्दछ.
छवि स्क्रैपर बिना कोडिंग को कौशल को बिना 90 प्रतिशत साइटहरु बाट जानकारी निकालन सक्छ. उदाहरणका लागि, जटिल जाभास्क्रिप्ट आधारित गतिशील साइटहरू र AJAX-आधारित वेब पेजहरु बाट.
प्रयोगकर्ता व्यवहार रिकार्ड:
सामान्य खैरो र डेटा निकाटरहरूले प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहार रेकर्ड गर्दैनन्।. तर छवि खरानीले प्रयोगकर्ता व्यवहारलाई हदसम्म रेकर्ड गर्न सक्छ र तपाईंलाई वेब पेजहरू मार्फत नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ.
प्रविधि सिकन प्रविधि:
त्यहाँ मात्र केहि वेब स्क्रैपिंग र डाटा खनन उपकरणहरू छन् जुन मेसिन सिकाउने प्रविधि हो।. छवि स्क्रैरले यस प्रविधिको स्वामित्व पाउँछ र सजिलै संग तपाईंको तस्विरहरू साथै तिनीहरूको पाठलाई मान्यता दिन्छ. यसले 70% भन्दा बढि मर्मत लागत कम गर्छ र तपाइँ लक्षित लक्ष्यबाट इच्छित डेटा प्राप्त गर्दछ.
स्वचालित लग इन:
छवि स्क्रैपरले तपाईंलाई वेब सामग्री पहुँच गर्न र धेरै साइटहरु लाई लक्षित गर्न सजिलो बनाउँछ।. साथै, तपाइँलाई साइटबाट सुरक्षित सामग्री पहुँच गर्न कुनै पनि विशिष्ट प्रमाणपत्रहरू आवश्यक पर्दैन. यसको सट्टा, तपाईले पाठ र तस्विर सहित सम्पूर्ण वेबसाइट पहुँच गर्न र हटाउन सक्नुहुनेछ छवि स्क्रैपरको साथ, लग इन जानकारीको लागी कुनै आवश्यकता बिना.
बुद्धिमानी साइट नेभिगेसन:
यो उपकरणले तपाइँको लागि तस्वीरहरू र भिडियोहरू स्क्रैप गर्न सक्छ तर तपाईंको समय बचत गर्दछ र सजिलै यसको कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ।. छोटोमा, तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाई उच्च गुणस्तर छविहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईले चाहानुहुन्छ जुन धेरै पृष्ठहरु बाट सटीक डेटा प्राप्त गर्नुहुनेछ.
छवि स्क्रैपर संग, तपाईं वेब सामग्री, डाटाबेस सामग्री, र ठूलो संख्याका साइटहरु बाट पाठहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ।. यसले स्वचालित रूपमा कथाहरूको साथमा चित्रहरू हटाउनेछ र तपाईंको शीर्षकहरू तपाईंको लागि पुनःलेखन गर्नेछ.
यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईं Google, Bing, याहू वा अन्य अनलाइन डेटाबेसमा प्रतिलिपि अधिकार-मुक्त छविहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग यो हो कि तपाईं छानिएका तस्वीरहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ बिना गुणवत्तामा सम्झौता. डाटासेटहरू फेला पार्न सजिलो छ जुन हाम्रो सबै आवश्यकताहरू अनुरूप गर्दछ. धन्यबाद, छवि खरानीले तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउँछ र उद्यम र शीर्ष ब्रान्डहरूको पूर्व छनौट हो. यदि तपाइँ प्रतिलिपि अधिकार कानुनको सम्मान गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले छवि स्क्रैपिङ उपकरण बाट उत्कृष्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ र नेटमा बढि सुर्तीहरू उत्पन्न गर्नुहुनेछ।.